लकडाउन खुकुलो बनाउँदा भारतमा ह्वातै बढे कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित – Online Nepal
लकडाउन खुकुलो बनाउँदा भारतमा ह्वातै बढे कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित
May 5, 2020 288
नयाँदिल्ली –– कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट भारतमा पहिलोपटक एकै दिन सबैभन्दा बढी संक्रमित व्यक्ति भेटिएका छन् । भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार विगत २४ घण्टाको अवधिमा ४ हजार जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने २०० जनाको निधन भएको छ ।भारतमा यो सहित निधन हुनेको संख्या एक हजार ५६८ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ४६ हजार ४३३ पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १२ हजार ७२७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अहिले पनि ३२ हजार १३८ जना उपचारका क्रममा रहेका छन् ।
भारतीय राज्य महाराष्ट्रमा १४ हजार ५४१ जना तथा गुजरातमा ५ हजार ८०४ जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको पश्चिममा पर्ने दुई धनी राज्य महाराष्ट्र र गुजरातमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ।
६ सातादेखि लकडाउनमा रहेको भारतमा उक्त प्रावधान केही खुकुलो पारिएको बेला सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको विवरणहरू आएका हुन्। भारतले चरणवद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै पसल र व्यापार व्यवसाय खोल्न अनुमति दिएको छ। घर फर्किन चाहने प्रवासी कामदारलाई विशेष रेलको व्यवस्था गरिदिएको छ।
यसैबीच, कैयौं भारतीय राज्यहरूले र/क्सीमा उल्लेख्य रुपमा कर बढाइरहेका छन्। मानिसहरूको बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न र राजस्व सङ्कलन बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला ती राज्यहरूले र/क्सीमा भारी कर वृद्धि गरेका हुन्।दिल्लीले उसकै शब्दमा “विशेष कोरोना शुल्क” भन्दै मङ्गलबारबाट र/क्सीमा ७० प्रतिशत कर लगाएको छ। आन्द्र प्रदेश र पश्चिम बंगालले पनि करमा भारी वृद्धि गरेको छ।तर कर धेरै लगाइए पनि दिल्लीका र/क्सी पसलहरूमा मानिसहरूको लामो लाइन लागेको छ र त्यहाँ प्रहरीले नियमन गरिरहेको छ।
भारतमा मार्च २४ तारिखदेखि लकडाउन गरिएको छ। र, त्यसयता पहिलोपटक सोमवार केही क्षेत्रमा रक्सी पसलहरू खुलेपछि अस्तव्यस्त दृश्यहरू देखिएको थियो र कतिपय ठाउँमा प्रहरीसँग झ/डपसम्म भएको थियो। ग्राहकहरूको भीड थाम्नै नसक्ने भएपछि केही पसलहरू केही घण्टामै बन्द भएका थिए।सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने नियमहरू पालना गराउन पनि निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो।
Prevलकडाउन भैरहेका बेला काठमाण्डौमा आजबाट लाग्नु भयो नयाँ नियम, देशभरी नै पर्ने भयो यसको तरङ्ग !
Nextकाठमाण्डौ जाँदै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला पर्नुहोला ठुलो समस्यामा !
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारका भाइ सचिनको ४२ बर्षको उमेरमा नि*धन